Author: Akigal Tygozuru
Click here to sign up. Inni hiikaa hangafaa waan qabuuf, dureettiin jaalatama waan ibsuufi gaafa wanti hojjetan hundi, waan namatti tolaniifi ayyaana carraa gaariidha. Kanaaf amantiifi deenaa tokkummaa akka qaban ifaadha. Ijoolleen kun waggaa saddeet hamma fixaanitti Dabballetti beekamu, Boorana keessatti Dabballee haa jedhaman malee, bakka biraatti maqaa biraa qabu.
KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO : Oromo Democratic Front
Gartuuleen kun aadaadhaan hangafaafi quxxusutti beekamu. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba. Isaaniis beekumsa qaban kana kaaniif dabarsuurratti barnoota laatu, shaakalsiisu. Hambisaaniis lafaa haaraya osoo hinqabatin Minas wajjiin lola gurguddaa osoo godhuu Gadaan isaa dhumeeRoobaleetti dabarse. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe.
Armaa gaditti sadarkaalee Gadaa jiraniifi murnoota Gadaa isaanii laalla. Kanarratti bakka guddaa qaba. Malaak Saggad nama Daragoot jedhamu akka Gojjaamiin ittisuuf itti erge. Warri quxxusuu isa hordofu. Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu. Dhugaan isaa garuu sirna amantiis, ofkeessaa qabaachuudha. Tuulam keessatti Yuba c.
Nabii — Kan abbootiiti. Gosootni kun akkasitt walitti dhufanii tokkooma gosaa tribal confederacies tolfatan.
Sirna kana keessatti manguddoonni qooda lammii guddaa qabu. Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha.
Gatamuun kana fakkaatan waan jiraniif namuu aadaa Gadaa keessaa kabajee jiraata. Dargaggooma Yeroo kana kan itti dargaggooman waan taheef, sadarkaa Gadaa kanaas bakka gargaraatti maqaa garagaraa waan qabuuf sadarkaa kanaan, Dargaggooma jedhama. Yeroo gabaaba keessati handhuura Dawaaroo gahe.
Booranaa alaas qaalluun kana muuduuf Oromoonni lafa fagoo deemanii dhaqu. Kana keessatti hooda, safuu, beekumssa, qaroomaafi yaadumsi qooda guddaa kennu.
Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee kitaabaa ittifufe. Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!!
Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Kanaanis lubbuun gootota akka J. Skip to main content.
Kanaaf, sadarkaadhaan bakka itti garaagarummaan jiru tokko kana taha. Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe.
Inniniis waan sirna sana gadi jabeesse akka tahe hubatamaadha. Ormoon naannoo Mandayyoo, Dallofi Jamjam bara dheeraa jiraataa turanii dhawaata lafa naannoo isaaniitti siqaa, irra jiraataa dhufan. Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha. Hawaasa Seemaa bara Gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko.
Abbaa Baahireenuu yeroo akkaataa godaansa Oromoo barreeyse: Waggaa 8 — 16tti akkaataa itti rifeensii isaanii qoramurraa yoo jedhame dhugaadharraa hin fagaatu. Qaaloota yeroo jennu akka bara dhihoo keessa ummata samuuf jecha sobanii, gowwoomsanii irraa waa guurratan akka qaallichaa Habashaamiti.
Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu. Qaalluun gosa beekamaa keessaa haa bahu malee, tokko qofa taha jechuumiti. Ituu keessatti Raaba jedhama. Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama.
Kiiloleen Gadaa isaa fixee Biifoleetti dabarse. Sirna tahu keessatti yeroo kanatti eeyba Qaalluu fudhachuun beekamaadha. Hamma Gadaan dhufee bakka qabtetti, manguddootaan buluun kun sadarkaa sadarkaan guddataa dhufuun hinhafne. Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Akka bara saniitti eenyulleen aadaa kana nifudhata.